China girazi musuo ratidza firiji & inotonhorera Kugadzira uye Fekitori | Saka Zvakanaka
Firiji & Inotonhorera Magonhi eGirazi
Vertical furiza & inotonhorera girazi musuwo
Famba-muFriji & Inotonhora Girazi Gonhi
Vending Machine Girazi Musuo
Waini Kabhini Girazi Magonhi
Mini-Firiji Girazi Musuwo
Horizontal Firiji & Inotonhora Girazi Gonhi
Akatungamira Girazi Door
TLCD Girazi Musuwo
Yakasarudzika inopofumadza kaviri Glazing
Girazi Girazi Ratidza Firiji & Nzvimbo
girazi musuo ratidza furiza & inotonhorera
Ruva goridhe kufamba-mufiriji kana kuratidza chinwiwa chinotonhorera ...
Akatungamira girazi musuwo wefriji yefriji kana inotonhorera kana bha ...
Yakasungwa Girazi Chikamu
Pane hwaro hwemakore eruzivo mune kugadzirwa kwesimba-rinoponesa firiji girazi musuwo, Saka Fine kambani yakawedzera mutsara mutsva wekuratidzira girazi musuo firiji / inotonhorera. Inorder yekupa zvimwe sarudzo yesimbi yekuponesa zvigadzirwa uye mafiriji mhinduro kune vatengi vedu. Isu tinotarisira kukurudzira zvigadzirwa zvedu kune vamwe vatengi vepasirese. Sekupa magetsi ekuchengetedza magetsi uye mhinduro dzemafriji, Saka Zvakanaka zvichaenderera mberi nekuchengetedza kudzora kwemhando yepamusoro, uye zvichawedzera kutsvagisa nekusimudzira kuedza kupa simba rakawanda rekuchengetedza uye chikafu & chinwiwa mafiriji mhinduro kune vatengi vedu.
* Yakarongeka kutonhora system, yakaderera ruzha dhizaini.
* Rinofambiswa pasherefu inogona kugadziriswa zvinoenderana zvakasiyana chinodiwa.
* Yakanyanya kutenderera dhizaini, yekuzvifambisa yega defrost yakakura velocity yechando.
* Kuruboshwe kana rihgt masitayera emusuwo anogona kuchinjaniswa kufadza yako chaiyo chikamu uye chinoshandiswa.
* Girazi rakapetwa rakapfava negirazi rakabayirwa mukati, zvinhu zvekudya zvinogona kuratidzwa zvakajeka.
* Wakashongedzerwa ne rotary caster, kufamba-famba kuri nyore uye chengetedza basa.
* Zvemukati zvinhu zvinopfapfaidza aruminiyamu, saka hutsanana uye hwakanaka.
* Rwomukati rambi repamusoro rinogona kugadzira mikana yekutengesa uye yakanaka kushambadza.
* Yakapinza compressor: Compressor unit yakavanzwa padenga neine porous hwindo padhuze nemumvuri, iyo inogona kudzivirira yakawanda sundry, panguva imwe chete, haizokanganisa muviri kupisa.
* Feni inotonhorera mhando: Mhepo-yakatonhorera firiji mhando, kutonhodza kwemhepo kunokonzerwa nemhepo duct inomanikidzwa kupinda mu sapce mu cabinet, kutenderera, yunifomu tempeature, kutonhora kumhanya, nyore kushandisa.
* Dhijitari dhairekitori: Magetsi themostat uye akataridza edhijitari kuratidza kwekururamisa uye nyore kuverenga.
* Double glazing glass magonhi: Double girazi girazi musuwo ne demist basa rekugadzirisa zviri nani nekuchengetedza simba. Saka hapazovi nekudonha kwemvura pamberi pesuwo regals kuti zvigadzirwa zvive nani kuratidza.
* Pasherufu: Ese masherufu anogona kuchinjika kusvika ku15 degree uye 30degree, powerder yakavharwa simbi yeplate, inogona kubata 300kg yega metre mita. Yakanaka mhando yezvinhu, haizombo ngura.
* Mwenje we LED: Simba rekuchengetedza, rakajeka uye rakareba nguva yekushanda. Kazhinji isu tinoshandisa 90cm kana 120cm LED mwenje, zvinoenderana nesaizi yefiriji.
Pashure: Silk Dhinda Girazi Gonhi reWine Cabinet kana Mini Bar Firiji
Zvadaro: Professional chinwiwa & chinwiwa firiji girazi musuwo
China Compressor Waini Inotonhorera uye Fan Kutonhora Firiji mutengo
China Yakadzika furiza uye furiza mutengo
China Showcase uye Firiji mutengo
Yekutengesa inoratidza girazi girazi firiji
Girazi remukova bhodhoro rinotonhorera
Nyanzvi yekunwa uye chinwiwa chinotonhorera
Famba-mufiriji negonhi regirazi
Kero:1st & 2nd pasi, Kuvaka A, Hongsheng Viwanda Zone, Nha. 16 yeXinlong Da Dao, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China